နှစ်ချို့ကော်ဖီ: May 2007
မနက်ခင်းရောက်တိုင်းအထူးတဆန်းနိုးထလာပုံနဲ့ ရိုးရိုးသားသားကမ္ဘာအနှံ့အပြားကို အော်ဟစ်ခဲ့...ဒုက္ခကိုချစ်တယ်ဒီကောင်းကင်နိမ့်နိမ့်လေးကို ချစ်တယ်ဒါဟာကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ အဖွင့်နဲ့အပိတ်ပေါ့ ညီမလေးရယ်။နှစ်ဆယ့်လေးနာရီတစ်ကြိမ် တရားကျဖို့စက္ကန့်နှစ်ဆယ်လောက်ပဲ လိုအပ်သတဲ့လေသူကိုယ်သူ အပိုင်တွက်ချက်ခရီးထွက်သွားသူကြီး ပြန်မလာမီဒီမှာ နောက်ထပ်နှစ်ဆယ့်လေးနာရီရှိတယ်ဘယ်သူတွေယူဦးမလဲ။ညီမလေးရေ...(ကိုယ့်ထွေးမေလေးရေ..)မျော်လင့်ခြင်းကတော့ သူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကွယ်ဆိုနေကျ နွေဦးသီချင်းမှာပြီးတော့ ငါတို့ရင်အုံတွေပေါ်မှာစံပယ်တွေကိုပဲ တစ်ပွင့်ချင်းနမ်းလို့။ကျော်မျိုး
မြူခိုးနဲ့ တိမ်တွေကငါတို့ကိုလိမ်နေတယ်တံလျှပ်နဲ့ရေရဲ့ ထင်ယောင်မှားမှုများတည့်မတ်စွာလွဲချော်ခဲ့သောအမှန်တရားများအတွက်နှလုံးသားကို သန့်သန့်စင်စင် ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။သိစိတ်နဲ့မသိစိတ်ထဲက ထင်မှတ်မှားဆန္ဒစွဲတွေအတွက်လင်းတတွေဝဲသလိုကန္တာရအညှီအဟောက်တွေကိုမှတပ်မက်စိတ် တလွင့်လွင့်နဲ့ဟင်လင်းပြင်ရဲ့ ရှိမှုမဲ့ကန့်သတ်မျဉ်းကိုဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်ပရမ်းပတာကာလ ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစီအစဉ်ချမှတ်ရန် ကြိုးစားပေမယ့်အားလုံးဟာ အပိုင်းအစများသာ။မိုးလှိုင်ည
ကိုလိုနီစစ်ပုလိပ်တွေက မြင်းနဲ့တိုက်တုတ်နဲ့ရိုက်လို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ကျော်ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းမှာအော်ကျက်ခဲ့တယ်။ အခု မိစ္ဆာဘီလူးတွေက သေနတ်နဲ့ပစ်၊ ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ရိုက် မစင်တွင်းထဲနစ်နဲ့ ဂျပန်ခေတ်ငရဲခန်းတွေထက် ဆိုးသွမ်းတဲ့ အတွေ့အကြုံကြား ကျောင်းသားတွေဘယ်လောက်များ ကျဆုံးခဲ့ရလဲ…။ မျက်စိပေါက်မှေးမှေး ဗိုက်ရွှဲရွှဲပြည်ကြီးသားတွေက မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရှာလို့ကောင်းတယ်တဲ့ အေး…မင်းတို့ပဲရှာလို့ကောင်း ငါတို့နှမတွေက ဘီယာဆိုင်မှာသီချင်းဆို kTvမှာအနမ်းခံလို့ ရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားနေရချိန်မှာ ငါတို့က တွေဝေနေလို့ရမလား…။ လိုက်ကာတွေချချထားတဲ့ ကက်စီနိုတွေကရန်ကုန်မှာ လပ်စ်ဗီးဂတ်စ်ထက်ပိုများတယ် ပြောတော့ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူ့မှတက်မနေဘူးတဲ့ ငါမြင်တာကတော့ ဥပဒေရဲ့အထက်မှာခွေးတက်နေတယ် မကျေနပ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး ဆီဘန်းနီဆရာတော်သာ သေသော်မှတည့်သြော်ကောင်းဧ။် ဒီခေတ်ကိုကြည့်ပြီး ရေးရရင် ဆယ်ခါပြန် သေချင်စော်နံသွားမယ် ငါတို့မှာ ပါးစပ်မဟရဲ၊ လက်ပန်းမပေါက်ရဲ ကြောက်တတ်ရင် အခါခါသေပေါ့…။ မိုးလှိုင်ည Posted by
သားသမီးတွေဟာကျောက်တုံးတွေဆိုရင်သူတောင်ပေါ်ကို တွန်းတင်ခဲ့တာ ခုနှစ်လုံးသူ့အပေါ်ပြန်ပိခဲ့တာ ခုနှစ်ခါငှက်ကြောင့်ညောင်ပင်ဟာ အသီးနဲ့ဝေးရသလိုငွေကြောင့်မိဘဟာ သားသမီးနဲ့ ဝေးရတယ်ဖုန်တက်နေတဲ့ အိမ်ကလေးမှာနေပေမယ့်နှလုံးသားဟာ တောက်ပအလင်းဖြာမြဲတစ်ခါတစ်ခါခြောက်ကပ်ကပ်အလွမ်းနဲ့အရပ်ရှစ်မျက်နှာရော်ရမ်းရမ်းတစ်ခါတစ်ခါအထီးကျန်ခြင်းကသွားရောဂါလို တဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲရင်းမိသားစုရထားရဲ့ စက်ခေါင်းတစ်ခုဟာမေတ္တ္တာဝေစုကို တလူလူလွှင့်ခဲ့သလိုစကားနည်းနည်းနဲ့ တရားမြဲရင်း အိုခဲ့ပြီအပွင့်တုံးသစ်ပင်လို နာကျင်စိတ်နဲ့ငါ့ပျက်ကွက်မှုတွေပါ တဲ့ကျွန်တော်တို့ ဆင်းရဲရတာကိုအားနာစကားဆိုရှာတယ်…အဖေ။ကိုသျှပ်(ကန့်ဘလူ)
သိပ်အကျယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး ၁၀ပေပါတ်လည် အခန်းထဲ စာအုပ်တွေ ပင့်ကူမျှင်တွေ ရှုပ်ထွေး ဂီတက အပိုင်းပိုင်းပျက်ကျ ဒဿန အကျိုးအပဲ့တွေ ပလူပျံ လက်ခံထားရတဲ့ငါ့ကို အစိတ်စိတ် ခွဲဖြာတော့အနတ်တ နံရံမှာ မှိန်ဖျော့နေတဲ့ ဂစ်တာတစ်လက် ထပ်မံဖွဲ့ဆိုဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူး ဆက်လက်သုံးစွဲဖို့ စကားလုံးတွေကျိုးပျက် ကဗျာဆရာကတော့ သူလက်မထပ်ရသေးဘူးတဲ့ လိပ်စာကဒ်အဟောင်းပုံထဲမှာ မင်းနာမည် ရှာမတွေ့တော့ဘူး ၈နှစ်မြောက် ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရထဲ ယူကလစ်ပင်တွေ တန်းစီပေါက်နေတဲ့ လမ်းကလေး ပုံဆွဲထားတယ် ညခန်းမထဲမှာ ငါတစ်ယောက်တည်း နှစ်ပါတ်လည်။ မိုးလှိုင်ည Posted by
အစက စပြောရင် အစက စပြောတာပဲရှိမယ် အခုငါ့ဆီမှာ မပြီးသေးဘူး အားလုံးက စိုးရိမ်ရေမှတ် ပြူတင်းပေါက်တွေက ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် နေရောင်ခြည်မရဘူး လေကောင်းလေသန့်မရဘူး ပတ်ဝန်းကျင်က အမြဲတမ်း ရှုခင်းအတုတွေနဲ့ မွန်းကျပ်နေတုန်း တံခါးကြီးရင် သော့ကြီးကြီးခတ်ရတယ် ဘယ်တော့မှလည်း ဖွင့်လို့မပြီးဘူး မနေ့ကချိန်းထားတဲ့ ကောင်မလေး ဒီနေ့အထိ ရောက်မလာဘူး အိုင်တီခေတ်တဲ့ (ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ) အဲဒီလိုပဲ ကဗျာဆရာက ရေးချင်ရာရေးတယ် အယ်ဒီတာတွေက ရွေးချင်ရာရွေးတယ် အားလုံးပဲ တစ်လွဲတစ်ချော် တကယ်ဆို ဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်… ဖြစ်မလာတာကိုပဲ လောကလို့ဆိုရမလား…။ မိုလှိုင်ည
ဘယ်တုန်းကမှ သားရေစိမ်းဖိနပ်တစ်ရံကို ဟန်ပန်ကျမစီးနိုင်ခဲ့တဲ့ခြေထောက် ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ မိုင်တစ်သောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်တဲ့….။ ရထားတစ်စီးရဲ့ အထူးတန်း ဘယ်လိုမှ ခြေဦးမသန်းခဲ့ဖူးတဲ့ကောင် ထိုင်ခုံမဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်နဲ့ ရာသီစာကုန်စိမ်းတွေလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးသိပ် နံရံတွေခေါင်းအုံးအိပ်ဖူးတယ်…। အဲဒီလို ဘ၀ကိုခရီးသွားတဲ့ကောင် သံသရာကိုမကြောက် အကြံအဖန်ကိုမကြောက် ဘ၀ကို သွန်လိုသွန် မှောက်လိုမှောက်နဲ့ စိတ်ထင်တိုင်းပြုကျင့် အတ္တတွေ ဆို့နင့်နေပုံက သူ့ကိုယ်သူတော့ ကဗျာဆရာတဲ့….။ မိုးလှိုင်ည Posted by
ဘ၀ခရီးရှည်မှာမရောက်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ခရီးအစကို သတိရလာတော့…।ဟိုး..အတိတ်ဝေးဝေးမှာလုံခြုံအေးချမ်းတဲ့ အမေ့အိမ်ကလေးကတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့အသွင်နဲ့အမေ့ပုံရိပ်တွေ ထင်ကျန်လို့သားတစ်ယောက်ကို ကြိုလင့်နေခဲ့….ဘ၀ဟာ မောပန်းလာတဲ့အခါပေါ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေကမျက်နှာဖုံးကွာကျပြီးအချိုကုန်သွားတဲ့ ပီကေတစ်ခုလိုဝါးရင်းနဲ့ပဲ စိတ်ပျက်လာခဲ့ရ….ဘ၀မှာ ဘယ်သူတွေအပြစ်ရှိလဲ….သစ္စာမဲ့တတ်တဲ့လောကကို ကျောခိုင်းပြီးအမေ့အိမ်ပြန်ခရီးကို သားစခဲ့ပြီ….ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့အမေရယ်ဒါပေမယ့် သားကြောက်ရွံ့မနေပါဘူးဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ အလှည့်စားခံရမှုတွေကိုနာကျည်းခံပြင်းခဲ့ပေမယ့်အမေ့ဆီမှာတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရုံနဲ့ကလေးဘ၀ကို သားပြန်ရဦးမှာပါ….။မိုးလှိုင်ည Posted by
ရပ်တန့်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီ လည်ပတ်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီ သေချာတာကကြာခဲ့ပြီဆိုတာပဲ လူတွေကသူ့ကိုကြည့်ကြည့်သွားကြတယ် လူတွေကသူ့ကိုကြည့်ကြည့်နေတုန်းပဲ သူက ကာလကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူး သူကသေချာတာတစ်ခုခုမပြောပြနိုင်ဘူး။ တစ်နေ့တစ်ခြားယိုယွင်းလာမှုနဲ့ ရှေးဟောင်းပြတိုက်တစ်ခုလို သူ့ဘ၀ကအေးစက်လို့ လူတွေကတစ်ခါတစ်လေသူကိုကြည့်တယ် ပြုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့သူ့ဘယ်ဘက်လက်တံ ကျိုးပျက်သွားခဲ့တဲ့သူ့ညာဘက်လက်တံ ကြိုးဝိုင်းထဲမှာသူကတိတ်တဆိတ်ရပ်လို့ တစ်ခါတစ်လေ လူတွေကခပ်ကြာခပ်ကြာကြည့်လေ သူ့မှာအရှက်ရလေပဲ။ မိုးလှိုင်ည
ငါ့ရင်ခွင်ထဲမှာမင်းအတွက်ပွင့်ခဲ့တဲ့ နှင်းဆီဖြူတစ်ပွင့်ရှိတယ် အဲဒီနှင်းဆီဖြူကိုမင်းယူဆောင်သွားပါ ပြီးတော့ ငါ့ရှေ့မှာဖြစ်ဖြစ်..(နောက်ကွယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့) မင်းနင်းခြေဖျက်ဆီးပြစ်လိုက်ပါ။ ငါ့ရင်ထဲမှာမင်းအကြောင်းဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ် အဲဒီနောက် ငါသေဆုံးသွားလိမ့်မယ် ငါ့အုတ်ဂူဘေးမှာ နှင်းဆီဖြူတွေပွင့်ဝေနေလိမ့်မယ်။ မိုးလှိုင်ည
ဖေဖော်ဝါရီနတ်သမီးရေ ငါ့ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားဝိညာဉ်တော်ဟာ ကျိန်စာသင့်ခဲ့ရတဲ့ လွင်ပြင်ကျယ်တစ်ခုလိုပါပဲ…. ဘာဖြစ်လို့များ မေတ္တာတရားရဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုအနုပညာကို မုန်တိုင်းဆင်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက် ကံကြမ္မာက ယိုးမယ်ဖွဲ့ခဲ့ရတာလဲ….။ အဖြေမရတဲ့ မေးခွန်းများစွာနဲ့ပဲ ငါ မွန်းကျပ်ခဲ့ရပြန်ပြီ….။ မငိုပါနဲ့ကွယ် ကံကြမ္မာကို တွန်းလှန်ဖို့အတွက် ဒါဟာ အင်အားတစ်ရပ်မှ မဟုတ်ပဲ နှလုံးသားချင်း ဆက်သွယ်နားလည်ထားတဲ့ အကောင်အထည်မဲ့ ဘာသာစကားနဲ့တင် ငါပြည့်စုံကျေနပ်ခဲ့ပါပြီ…. မင်းမျက်ရည်တစ်စက်ကြွေတိုင်း ငါ့နှလုံးသားတစ်ခါသေတယ်…. ဖေဖော်ဝါရီရယ်…သေချာပါတယ်… ငါတို့ချစ်မေတ္တာဟာ ကြွေလွင့်သွားတဲ့ ကြယ်တစ်စင်းလိုပါပဲ ဖြူစင်စွာတောက်ပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မည်သူမျှ အမှတ်မရခဲ့ရင်တောင် ငါ့ရင်ထဲမှာ ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့ အတိတ်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်….။ မိုးလှိုင်ည Posted by
အတောင်ပံရိုင်းတစ်စုံအတွက် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်းကင်ကို မော်ကြည့်ရင်း… ငါ့အပေါ်ကို မလင်းပါနဲ့ လမင်းရယ်… ငါဟာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ကို စိုးမိုးမယ့် ငှက်ဆိုးတစ်ကောင် ချိုသာတဲ့အသံထွက်တွေနဲ့ မလိမ်ညာတတ်ခဲ့သူမို့ အားလုံးရဲ့အယူမှာ အမင်္ဂလာလို့ ထင်မှတ်ထားကြတယ်…။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြန့်ချလိုက်တဲ့ အတောင်ပံတစ်စုံရဲ့ခတ်သံဟာ မုန်တိုင်းဆန်နေလိမ့်မယ်… အနိမ့်အမြင့် လောကဓံကြား နှလုံးသားဟာအပူနဲ့ ဖိအားတွေကြောင့် မာကျောကျစ်လျစ်သွားပေမယ့်… တန်ဖိုးတွက်စနစ်အတွက်တော့ ရတနာဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး…။ ဖြတ်သန်းဖူးတဲ့သမိုင်းမှာ ငါဟာ အထူးအဆန်းဖြစ်ခဲ့တယ် အရူးမှတ်လို့ ၀ိုင်းကြည့်နေသူတွေက…ကဗျာဆရာလို့ သိသွားတဲ့အခါ… အထင်သေးရှုံ့ချတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကြား ငါဘာမှားခဲ့ပါသလဲ ကမ္ဘာကြီးရေ… ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ ကွန်ကရစ်ထောင်ချောက်ထဲမှာ… ညနေစာ မစားရသေးပဲနဲ့… ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို စိတ်အေးလက်အေး ရွတ်ဆိုနေနိုင်တာ ငါတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လေ….။ မိုးလှိုင်ည Posted by
မတက်ရလျှင်တော့၊ တစ်သက်ပါ့ မခံပေါင်…တဲ့။ ကနစို တုံးတိုသစ်က၊ ကြွေးဟစ် ရန်ထောင်။ မနက်က အသေကောင် သူတောင်မှ တက်နိုင်သေး။ ငတုံးတို ကနစိုသားပေပါ့ ချောင်းဖျားကို ခါတစ်ခေါက် ရောက်ရမယ်လေး…တဲ့။ ဒီချောင်းမှာ ဒီတရားတဲ့ ကြားမှာပါ့ ကျူရိုးရှင်။ ကနစို တုံးပျိုလှကို၊ နားချပါ ရှင်။ ဒီချောင်းကို ၀င်မိလျှင်၊ မထင်နဲ့ တစ်ခေါက်တည်း။ တက်တုံ သက်တုံနဲ့ တက်မကုန် သက်မစဲ၊ မောလောက်အောင်ပဲ။ ဒီချောင်းမှာ ဒီတရားတဲ့ ကြားမှာပါ့ ကျူရိုးရှင်။ ကနစို တုံးပျိူလှကို၊ နားချပါ ရှင်။ ဒီချောင်းကို ၀င်မိလျှင်၊ တက်ချိန်တွင် ဆင်းနိုင်ပဲ။ ဆင်းချိန်မှာ တက်လိုလည်း၊ စောင့်ရ စမြဲ။ မနက်က တက်တဲ့ဒီ၊ မမီလိုက် လေလည်း။ ညဦးယံ ဒီပြန်တက်ပါလိမ့် တက်စရာ ခက်ပါပဲ၊ ပန်းဗေဒါနည်း။ ဇော်ဂျီ (၁၉၆၀) (ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ရာပြည့်ကိုဆရာ့ကဗျာဖြင့်ပူဇော်ကန်တော့ပါသည်)
မျော်လင့်ချက်ဆိုတာ ရှင်သန်မှုရာစုနှစ်တွေရဲ့မောင်းနှင်အား ခရီးသွားတွေအတွက်တော့ ဘယ်နှမြို့ဖြတ်ခဲ့ပြီလဲ။ တွန့်ကြေမွနေတဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာတော့ သစ်လွင်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေအပြည့် သမိုင်းကိုခြေရာပြန်မကောက်မိချင်အောင် အတိတ်ကမှောင်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဒီတစ်နေ့ကိုပဲ ကွက်ကွက်လင်းတတ်တဲ့ နေမင်းကိုလည်းမခင်ချင် ဒီတစ်ညတည်းပဲလက်လက်ပြတတ်တဲ့ ကြယ်စင်တွေကိုလည်း ငါ့ကော်ဖီခွက်ထဲကမြို့ပျက်တွေကိုပဲ ဇွတ်မျိုချခဲ့မိတယ်။ မိုးလှိုင်ည (သံလွင်အိပ်မက် အမှတ်၆) Posted by
ညနေငါးနာရီခွဲရင်ငါ့စိတ်တွေ ကယောင်ချောက်ချားနဲ့ရင်ထဲက ဒဏ်ရာဟောင်းတွေကသိပ်သည်းဆထူထဲလို့လမ်းတွေပေါ် လှိမ့်ထုတ်လိုက်ရမလားငါ့ဥခွံ့ ကျဉ်းကျဉ်းထဲကမင်းပုံတူကို ငေးနေရမလားအဲဒီလို ယောင်ချာချာဖြစ်ခဲ့တာငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ ညနေတိုင်းရဲ့ငါးနာရီခွဲ……။ညနေငါးနာရီခွဲရင် တို့နှစ်ယောက်ဆုံကြတယ်သိမ်ကြီဈေး စီရုံအောက်မှာလား…ဆူလေးဘုရားလမ်းပေါ်မှာလား…လက်ရွေးစင် ကဖီးမှာလား…।အခု အဲဒီနေရာတွေမှာမင်းကို ရှာမတွေ့တော့(ဘယ်ဆီကို လွင့်နေပြီလဲ…အချစ်ရယ်)ညနေ ငါးနာရီခွဲရင်ငါ့ရင်ထဲမှာ မုန်တိုင်းတစ်ခုရာသီဥတု မကောင်းတော့ဘူးစိတ်ဓာတ်ကျ ရောဂါနဲ့အရက်ခွက်ထဲ ခေါင်းစိုက်ချလိုက်ရမလားစီးကရက်တွေ ခပ်များများ ဖွာရှိုက်မိတယ်ဒါတွေကို မင်းမကြိုက်တာ သိပေမဲ့ငါ့ကိုလည်း မင်းမကြိုက်ဘူးလေ…။ညနေ ငါးနာရီခွဲရင်ငါ့အတောင်ပံတွေရဲ့ လက်ကျန်ခွန်အားနဲ့ရန်ကုန် ကောင်းကင်ပြင်ကျယ်ထဲခပ်ဝဲ၀ဲ ပျံတက်ခဲ့တယ်မင်းကို ရှာဖို့အတွက်တဲ့ငါ့ရင်ထဲမှာတော့ အသည်းကွဲညနေငါးနာရီခွဲက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးတဒေါင်ဒေါင်မြည်လို့…..။ မိုးလှိုင်ည Posted by
အိပ်မက်ကို လိပ်စာတပ်ပြီးမင်းဆီပို့လိုက်ပြီ။ရည်ရွယ်တဲ့ ချစ်ခြင်းကတော့အပြစ်ကင်းခဲ့မယ်ထင်တယ်။မြတ်နိုးမှုက ကဗျာတစ်ပုဒ်လိုဆူညံတိတ်ဆိတ်မင်းခေါင်းအုံးအိပ်တဲ့ အရာဟာငါ့နှလုံးသား သာဖြစ်သင့်တယ်။မင်းနဲ့ကိုယ်ကြားမှာ စကားတစ်ခွန်းမှ မရှိလည်းနှလုံးသားက အရာရာကြားနှင့်ပြီးပြီ။အလွမ်းနဲ့ဖျော်စပ်ထားတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုယ်ညတိုင်းသောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ချစ်သူရဲ့ လက်ဖ၀ါးလေးကသာကိုယ်ဆွဲကိုင်ထားတဲ့ အောင်မြင်မှုဆိုရင်ဘ၀မှာ တစ်ခြားအရာတွေ ဘာမျှမရှိလည်းကိုယ်မှုနေစရာ မလိုတော့ဘူး။မိုးလှိုင်ည Posted by
နေတွေ တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းကျွန်တော့်ခေါင်းပေါ်က ဖြတ်ပျံသွားကြတယ်လမ်းမှားတဲ့မြေပုံနဲ့တော့ကောင်းကင်မှာ လက်လက်ထနေတဲ့ကြယ်တွေကို ရမှာမဟုတ်ဘူးအရှုးအမှုး ထွန်ယက်ဖူးတဲ့ ကန္တာရတစ်ခင်းကိုရေမလောင်း ပေါင်းမသင်နဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း မပြုပြင်ချင်တော့လမ်းဟောင်းတွေ ဗွက်ထနေလို့ကံတရားကို အယုံအကြည်မဲ့ပေမယ့်ဆူးခြုံတွေရှိတဲ့လမ်းက သွားရတော့မယ်ဘ၀က အရာရာနောက်ကျပြီးသားလေပန်းတိုင်ကို ပျပျလေး မြင်ရပြီးတဲ့နောက်ဝေဒနာသိပေမဲ့ ဆေးမှားစားခဲ့မိပြန်ပြီကျွမ်းတမြေ့မြေ့ တက်တခေါက်ခေါက်အခုမှတော့ မကြောက်ပါဘူး…။ မိုးလှိုင်ည Posted by
ကြယ်တွေကို တိုင်တည်ပြောချင်တယ်ကွာဖြူစင်တဲ့ ကိုယ်ချစ်ခြင်းကိုမိုးကောင်းကင် အနှံ့အပြားကကြယ်စင်ဖြူလေးတွေတောင် သနားနေကြတယ်။ချစ်သူ့မျက်နှာ တစွန်းတစကို တပ်မက်မောမိလို့အိပ်ပျက်ညများစွာမှာကိုယ့်ရဲ့အလွမ်းသင့် ခြေရာတွေကချစ်သူအိမ်ရှေ့ကျောက်ခင်းလမ်းလေးအပေါ်အထပ်ထပ် ပေကျံစေခဲ့တယ်။စာနာ နားလည်ပေးတတ်တဲ့ရေတမာ ပင်အိုလေးကသာကိုယ်အလွမ်းတွေကိုယ်စားသစ်ရွက်တွေ ခြွေချပေးခဲ့တာနွေလယ်ညတွေကတော့တစ်ဖက်သတ် ချစ်နေရသူအတွက် ကန္တာရပဲလေ။၀မ်းနည်းအားငယ်စွာပေါ့တစ်ခါတစ်ခါကိုယ့်ကိုကိုယ် နာကျည်းမိလိုက်တယ်။ကိုယ်ချစ်မိသူရဲ့ ငြင်းပယ်စိမ်းကားခြင်းခံရတဲ့နှလုံးသားလောက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများတဲ့အရာ ဘာများရှိတော့မှာလဲ။မိုင်တစ်သောင်းဝေးနေပါစေနှလုံးသားချင်းသာ နီးစပ်နေရင်အဲဒီခရီးက အနီးလေးတဲ့ကိုယ်တို့မှာတော့အမိုးတစ်ခုတည်းအောက်မှာ နေရပေမဲ့နံရံဆိုတဲ့ ခြားနားခြင်းကကိုယ်နှလုံးသားကို သံခြေကျင်း ခတ်ထားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ အဆုံးတစ်နေ့ပေါ့ ချစ်သူသံသရာဆိုတဲ့ အကွေ့လေး မချိုးခင်အထိဖြူစင်စွာ ချစ်နေခွင့် တစ်ခုကိုပဲမက်မောတသ တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။မိုးလှိုင်ည Posted by
မျက်လှည့်ပွဲထင်ပြီးဝင်ငေးမိတာက…အစအဲဒီမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်သတိမရတော့ဘူး။သူ့ခေါင်းစဉ်ကမီးငြိမ်းနေတဲ့ ဖရောင်းတိုင်ကိုမီးထွန်းပြဖို့တဲ့။ကျွန်တော်သိချင်တာကအလင်းထက် ခရီးသွားနှုန်းပိုတဲ့ဝါကျတစ်ကြောင်းမျက်လှည့်ဆရာ ခေါင်းလောင်းတီးတော့ကျွန်တော် လှည့်ပြန်လာခဲ့တယ်အိမ်ကိုတော့ မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်မျက်လှည့်ပွဲ တစ်ခုဆီ…။မိုးလှိုင်ည
ကျွန်တော်အတွက် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ပြူတာဘာသာရပ်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရအောင် အစစအရာရာ ကူညီတဲ့ကိုနေဘုန်းလတ်နဲ့ကျွန်တော့်ကို ဘလော့ပြုလုပ်ပေးတဲ့ခင်မင်လေးစားရသောနိုင်းနိုင်းစနေတို့ကို ဒီ wed pageကနေကျေးဇူးစကား ဆိုပါရစေ။မိုးလှိုင်ည Posted by
နင်နဲ့ငါနဲ့ ပြောရင်နင်ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေကျခမ်းခမ်းနားနား နင့်အသိုင်းအ၀ိုင်းကငါ့ကို အရိုင်းအစိုင်းလို့ သမုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ အပေအတေလေးရဲ့စိတ်သဘောထားကို နင်အသိဆုံးပဲအရင်က အဲဒီစိတ်ထားလေးကို ချစ်တာလို့နင်ပဲ အမြဲပြောခဲ့တာငါကလည်း သေချာရဲ့လားအထက်တန်းစား မမလို့ အမြဲမေးဘူးတယ်အခုတော့ မသေချာဘူးဆိုတာသေချာသွားပြီငါကနင့်ကို မလွမ်းဘူးဆိုတဲ့စကားကိုငွေဝင်ဂါထာလို မိုးလင်းတိုင်းရွတ်တယ်ဒီဘ၀တော့ နင်နဲ့ငါ လက်မထပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း နင့်သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေနဲ့တွေ့တိုင်းပြောမိတယ်နင်ကအနုပညာ အတုအစစ်ကိုခွဲခြားမသိဘူးနာမည်ကြီးရင် ပိုက်ဆံရှိရင်အောင်မြင်ပြီလို့ နင်တွေးတယ်အဲဒီလိုနဲ့နင်မေးတဲ့မေးခွန်းကငါဘာအသုံးကျသလဲတဲ့နင်ငါ့ကို ဘာအသုံးချချင်မှန်း မသိတော့ငါဘာမှ ပြန်မဖြေတတ်ဘူးငါ့ကိုအရူးဆိုပြီး နင်ထားခဲ့တော့ငါရူးကြောင်းသေချာသွားအောင်နင်မရှိတဲ့ မနက်ဖြန်မှာတစ်စုံတစ်ယောက် ဖတ်မိဖို့အတွက်ဒီကဗျာကို ငါရေးတယ်။မိုးလှိုင်ည